Talem-paritry filaminana anatiny Atsinanana : “Tifiriko avy hatrany ireo voasazy mandra-pahafaty mivoaboaka eny” | NewsMada
Talem-paritry filaminana anatiny Atsinanana : “Tifiriko avy hatrany ireo voasazy mandra-pahafaty mivoaboaka eny”
Par Taratra sur 14/01/2016
Nambaran’ny talem-paritry ny filaminana anatiny, ao amin’ny faritra Atsinanana, ny kaomisera divizionera Lié, omaly, fa « tsy tokony havoaka ny fonja na koa homena Mop (Main d’œuvre pénal) ireo olona voaheloka amin’ny fakana an-keriny (kidnapping) ». Nohitsiny fa « tsy misy olona afaka manatanteraka izany afa tsy ireo mpitsara tompon’andraikitra ihany ».
Araka ireny niaraha-nanaraka teto ireny, votsotra soa aman-tsara ihany, teo am-pelatanan’ireo jiolahy naka an-keriny azy, afakomaly, i Arnaud. Izy no afaka, fa tsy mijanona hatreo kosa ny zava-misy sy ny akom-baovao mikasika ity « raharaha kidnapping », mitana ny sain’ny maro, tsy any Toamasina ihany, fa saiky manerana ny Nosy mihitsy ity. Omaly àry, naneho ny heviny tamin’ny mpanao gazety ny talem-paritry ny filaminana anatiny miadidy ny faritra Atsinanana, ny kaomisera divizionera Lié. Fantatra tamin’izany fa tsy azoazon’ity tompon’andraikitra voalohany, miadidy ny filaminana anatiny any Toamasina ity loatra ny filazana, taorian’ireny zava-nitranga, omaly, ireny fa hoe «tsy nivoaka ny fonja nihazonana azy, tao Tsiafahy, i Freddo (iray amin’ireo voalaza fa atidohan’ity raharaha fakana an-keriny ity), kanefa afaka nifampiantso tamin’ny alalan’ny finday tamin’ny mpiandry fonja miasa sy monina eto Toamasina».
Fanontaniana no napetrany : « malalaka ve izany ny fampiasan’ireo voafonja ao Tsiafahy finday ? » Mbola ity tompon’andraikitra ambony ao amin’ny polisim-pirenena any Toamasina ity ihany no nanamarika fa « tsy tokony havoaka na homena fahazoan-dalana hiasa ivelan’ny fonja, na ilay antsoina hoe « main d’œuvre pénal » (Mop) ireo olona voaheloka amin’ny fakana an-keriny (kidnapping). Nohitsiny fa « tsy misy afaka manome baiko amin’ny fanatanterahana izany afa-tsy ireo mpitsara tompon’andraikitra ihany ». « Izao iarahan’ny rehetra mahita izao ny voka-dratsin’izany: mbola manohy ny asa ratsiny hatrany ireo efa za-draharaha amin’ny asan-jiolahy, ka mampirongatra ny tsy fandriampahalenana, izay mampihoron-koditra ny firenena mihitsy », hoy ihany izy. Nolazainy koa fa « hotifiriko avy hatrany izay gadra voaheloka mandra-pahafaty mbola hita mivoaboaka eny ».
Manampy tosika ny BC, Anosy
Tsy mifarana hatreo fa tsy maintsy hitohy ny fanadihadiana sy ny famotorana rehetra mikasika ity raharaha ity. Araka ny nambaran’ny kaomisera divizionera Lié mantsy, mbola vao ireo irakiraka, mpiandry trano, mpanome sakafo… ihany no voasambotra. Mbola miriaria any, araka ny fanazavany, ireo tena atidoha, toa an-dry Freddo, Tidakely, Lejao, Roly… izay efa samy namoahan’ny fitsarana didy fampisamborana.
Etsy andanin’izay, fantatra ihany koa izao fa efa tonga any Toamasina, hanampy ireo mpanao fanadihadiana any an-toerana, ireo polisy avy ao amin’ny borigady misahana ny heloka bevava (brigade criminelle) avy aty Anosy, Antananarivo, tarihin’ny lehibeny, ny kaomisera Ostrome.